::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather लोक विजयसंग रेडियोमा एक घण्टा:: Rojgar Manch ::
लोक विजयसंग रेडियोमा एक घण्टा
बैशाख १२ पछिका हजारौ पराकम्पहरु गइरहँदा कहाँ कहिले र कति रेक्टर स्केलको पराकम्प गयो भन्ने विवरणसंगै एउटा नाम जोडिएर आउँथ्यो लोक विजय अधिकारी ।
बुधवार, २०७३ बैशाख २९ गते १६:४८
मेरो निवास र खानी तथा भूगर्भ विभागको दूरी केहि मिनेटको मात्रै हो । २०७२ बैशाख १२ अगाडी त्यो कार्यालयको बारेमा खासै वास्ता हुन्थेन र त्यहाँका कर्मचारीको बारेमा पनि कुनै सरोकार हुदैनथ्यो ।
बैशाख १२ गतेको भुकम्प जाँदा म आफू दाङ्ग जिल्लामा पुगेको थिए । भुकम्प पश्चात उपत्यकाको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । घरमा कोही बस्न सकेनन् । मेरो परिवार पनि घर छोडेर खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको ठीक पछाडी शहीद स्मारकको खुल्ला चौरमा आश्रय लिएर बसे ।
शहीद दिवसका दिन मात्र भीडभाड हुने शहीद स्मारक बैशाख १२ पछि केहि महिनासम्म उस्तै भीडभाड भइरह्यो । धेरैले त्यो खुल्ला ठाउँलाई आफ्नो सुरक्षित वासस्थान बनाए । भुकम्प गएपछि लगत्तै म पनि काठमाण्डौ फर्के र केहि दिन शहीद स्मारकको चौरमा नै जीवनको सुरक्षा महशुष गरी त्यहि बसियो । बेला बेलामा म आफू कोठामा आए पनि साना छोरीहरु अदिती र अनसूया घर देख्दै डराउँथे, घर भित्र पस्नै मान्दैनथे । खानी तथा भूगर्भ विभागको पर्खाल संगै जोडिएको शहीद स्मारक नै छोरीहरुको खेल्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ, खाने ठाउँ अनि सुत्ने ठाउँ बन्यो ।
छापा, अनलाइन, टेलिभिजन र एफ.एम.बाट वारम्वार भुकम्पसंगै जोडिएर आउने नाम लोक विजय अधिकारी २०७२ सालमा सवभन्दा धेरै ठाउँमा, धेरै पटक दोहोरिएको नामको रेकर्ड राख्ने नाम हो भन्दा अरु कसैले दावी गर्न नसक्ला ।
लोक विजयको नाम भुकम्पको जानकारी दिने प्रसंगमा मात्र पनि दोहोरिएन । नेपाल सरकारका एक जना कर्तव्यनिष्ट, पेशा प्रति अत्यन्तै सम्वेनदशील व्यक्तिको रुपमा पनि उनको नाम सुनियो । भुकम्प पछि उनको दिनचर्या सबैको चासोको विषय बन्यो ।
बैशाख १२ गतेको भुकम्प पछि हामी सबैले सबैलाई भेट्दा, फोन गर्दा सोधिने प्रश्न एकै थियो भुकम्प आउँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? लोक विजय अधिकारीलाई पनि संचारमाध्यम, साथीभाई र आफन्तले भेट्दा सोध्ने प्रश्न त्यहि नै थियो ।
२०७२ बडा दशैंको टीकाको दिन थियो । टीका लगाउने क्रममा लोक विजय अधिकारीसंग अनपेक्षित भेट भयो । नेपालमा पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुले भेट्ने रहर गरेर भेटिसकेका वर्षभरिका चर्चित व्यक्तिलाई एकाएक भेट्दा एक मन त विश्वास पनि लागेन । संचारमाध्यममा आइरहने नाम र भेटिएका व्यक्ति एकै हुन् त भन्ने दोहारमा पनि परे । तर सत्य त्यहि थियो त्यो दिन मैले राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारीलाई उनको सपरिवार सहित भेटेको थिए । आश्चर्य त्यतिमा मात्र पनि सकिएन । कुरा गर्दै जाँदा लोक विजय अधिकारीको पुख्र्यौली घर लमजुङ्ग जिल्ला नै भएको कुराले झन आश्चर्यमा परे । यति चर्चित, यति इमान्दार र सरल व्यक्ति आफ्नै गृह जिल्लाको भएको पाउँदा असाध्यै खुशी पनि लाग्यो । वर्षका चर्चित व्यक्तिसंग छोरीहरुको फोटो पनि खिचाए । आफूले भने खिच्ने तालमेल मिलेन । छोरीहरुसंग खिचाउँदा नै सन्तुष्टि मिल्यो ।
चाडवाडको दिन भएकोले धेरै वेर कुराकानी हुन नपाए पनि त्यो भेट मेरो जीवनको अविश्मरणीय भेटको रुपमा रहेको छ र रहिरहनेछ ।
धेरै संचार माध्यमले उनलाई विभिन्न तरिकाले आफ्ना प्रस्तुतिहरुमा जोडिसकेका थिए । २०७३ वैशाख १४ गते रेडियो सिटी एफ.एम ९८.८ मा मेरो प्रस्तुति विचार मञ्च मा भुकम्पसंग जोडिएका कुनै व्यक्तिलाई अतिथि बनाउने सोच रहेको सहकर्मी मित्र खेमराज खनाललाई सुनाए । उनले तुरुन्तै जवाफ दिए लोक विजय अधिकारीलाई बोलाउनुहोस् । त्यसो त मेरो मनमा पनि लोक विजय अधिकारीलाई बोलाउने रहर, चाहना थियो नै । तर लोक विजय अधिकारी प्रति मेरो मनमा रहेको उच्च भावले त्यति ठुला मान्छेले कसरी समय दिन सक्लान् र ? भन्ने लागिरहेको थियो । मनको त्यहि भावले लोक विजय अधिकारीलाई बोलाउन हिच्किचाइरहेको थिए ।
मित्रको प्रस्तावलाई गहन रुपमा लिए । मेरा हरेक परिस्थितिमा सरसल्लाह दिइरहने मित्र उत्तम भट्टराईलाई पनि जानकारी गराए । उनले यो अवसरमा लोक विजय अधिकारी भन्दा अर्को व्यक्ति सहि व्यक्ति हुनै सक्दैन भन्ने जवाफ दिए । तर बैशाख १२ र १३ गते खानी तथा भूगर्भ विभागको आयोजनामा राजधानीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएकोले भेट्न सम्भव भएन ।
२०७२ वैशाख १२ को भुकम्प गएको सन्दर्भमा लोक विजय अधिकारीसंग कार्यक्रम बनाउन नसके पनि सोहि भुकम्पको ठुलो पराकम्प गएको बैशाख २९ गतेको सेरोफेरोमा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा लागे ।
बैशाख २८ गते मंगलबार मेरो कार्यक्रमको मिति थियो । वैशाख २७ गते सोमवार १०ः३० बजे तिर खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रमा म र मेरी श्रीमती विकला संगै गयौ । श्रीमतीलाई पनि संगै लानुको कारण चाहि वर्षका सर्वाधिक चर्चित व्यत्तित्वसंग दुवै जनाले संगै भेट्ने चाह अनि यो पटक चाहि लोक विजय अधिकारी संग एउटा फोटो जसरी पनि खिच्ने रहरले पनि थियो ।
मोटरसाइकल पार्किङ्ग गरेर राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रको पहेलो भवनतिर लम्किएँ । उक्त भवन भुकम्पीय जोखिममा रहेकोले पहेलो स्टिकर टाँसिएको थियो । डराई डराई हामी भित्र पस्यौं, भ¥याङ्ग उक्लिएर निक्कै अगाडी बढे पछि लोक विजय अधिकारीको कार्यकक्षमा पुग्यौं ।
संयोगवस समय नै नलिइकन गएको भए पनि लोक विजय अधिकारी आफ्नो कार्यकक्षमा भुकम्पका तरङ्गहरुका धर्का कम्पुटरमा केलाइरहेका अवस्थामा भेट्यौ ।
हामीलाई देखे पछि उनी टक्क रोकिए, हामीले अभिवादन गर्यौ र उनले पनि अभिवादन फर्काए । दशैंको टीकाको दिनको त्यो अपत्याशित भेटको प्रसंग संगै कुराकानी सुरु भए । त्यो बेला फोटो खिचेका नानीहरुको के छ भनेर उनैले सोधे । यति व्यस्त मान्छे, दिनमा सयौं मान्छेसँग भेटघाट हुन्छ र पनि झण्डै ७÷८ महिना अगाडी भेटिएका ती वालिकाहरुसंगको भलाकुसारीको प्रसंग उनैले निकाल्दा म फेरी आश्चर्य चकित भए । उत्तिकै खुशी पनि ।
कुरकानी कै सन्दर्भमा मैले वैशाख २८ गतेका को विहान रेडियो सिटी एफ.एम ९८.८ का लागि एक घण्टाको समय मागे । उनले डायरी पल्टाए, गर्न पर्ने र गर्न वाँकी काम बग्रल्ती रहेको बुझियो । २९ गते विदेश भ्रमणको मिति तय भएकोले तयारी गर्न धेरै काम बाँकी रहेको भएता पनि उक्त दिन एक घण्टाको समय मिलाउछु भन्ने उनको जवाफले निक्कै खुशी लाग्यो ।
५०/६० वटा एफ.एम. स्टेशन रहेको उपत्यकामा हरेकलाई एक एक घण्टा र वाटोको समय समेत गणना गर्दा झण्डै दुई घण्टा समय खर्चनु पर्ने अवस्थामा रेडियो सिटी एफ.एम. ९८.८ का लागि उक्त समय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता पछि हामी फोटो खिचेर छुट्टियौ ।
यता फेसबुकमा मंगलबारको प्रस्तुतिको लागि लोक विजय अधिकारीलाई अतिथिको रुपमा निम्त्याएको जानकारी पोष्ट गरिसकेको थिएँ भने कतै तत्काल कुनै फरक परिस्थिति सृजना भएर उनले समय दिन नसक्ने पो हुन् कि भन्ने त्रास भने मनमा रहिरहेको थियो ।
२७ गतेको राती समेत सोही त्रासले राम्रोसंग निदाउन सकिरहेको थिइन । २८ गते विहान ७ः०० बजे फोन गरे । आफू धापासी स्थित घरबाट निस्कनै लागेको जानकारी प्राप्त भएपछि भने मन ढुक्क भयो । ७ ः४५ बजे हामीले गहना पोखरी स्थित रेडियो सिटी एफ.एम ९८.८ को स्टुडियोमा भेट्यौ ।
ठीक ८ बजे विचार मञ्च सुरु भयो ।
मैले लोक विजय अधिकारीलाई पहिलो प्रश्न राखे २०७२ बैशाख १२ गते भुकम्प जादा तपाई कहा के गर्दै हुनुहन्थ्यो ? जवाफ थियो विदाको दिन थियो घरमा नै बसिरहेको थिए, एकाएक भुकम्प आयो, सुरुमा त रमाइलो लाग्यो । तर अलि बेर हल्लाए पछि भने यो ठुलो भकम्प हो है भन्ने लाग्यो, मन आत्तिन थाल्यो । परिवार कता छन् भन्ने चिन्ता लाग्यो । कम्पनको गति बढ्दै थियो अव यहि नै जिन्दगीको अन्तिम क्षण रहेछ जस्तो लाग्यो । कम्पन अलि कम भए पछि परिवारका अरु सदस्यहरु पनि सकुशल रहेको थाहा पाए ।
त्यसपछि छिमेकीको मोटर साइकलमा पछाडी बसेर अफिस हान्निएका लोक विजय अधिकारीको व्यस्तता यति बढ्यो कि परिवारसंग समेत कुनै सम्पर्क भएन । एक हप्ता पछाडी श्रीमतीले लेखेको एस.एम.एस आयो । लेखिएको थियो, ‘तपाई संग भेट हुन सकेन, काठमाण्डौ हल्लाइरह्यो, बाचिने आश पनि मर्न थाल्यो, हामी त सुर्खेत हिँड्यौ, तपाई सुरक्षित रहनु होला ।’
यो एक वर्ष उनी मुस्किलले ६ महिना जति मात्र घरमा बसेका छन् अरु दिन र रात भने खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रमा नै विताएका छन् । सुरुका तीन दिन सम्म मुखमा पानी सम्म नपरेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।
विचार मञ्चको अन्तिम तिर प्रश्न गरेको थिए, २०७२ बैशाख १२ गतेको भुकम्पलाई सम्झेर २०७३ बैशाख १२ गते पनि नागरिकहरु त्रसित मुद्रामा रहे । धेरैको मनमा आज पनि भुकम्प जान्छ कि भन्ने डर लागिरह्यो । विद्यालयहरु बन्द गरियो, के भोली बैशाख २९ गते पनि भुकम्प जान्छ त ? जवाफमा उनले भने त्यस्तो सम्भावना रहँदैन । तर भुकम्प जाने सम्भावना भने सधै रहिरहन्छ । नभन्दै आज विहान मात्रै सानो पराकम्प गयो । भुकम्पको भविष्यबाणी गर्न नसकिने भए पनि हामी सधैं भूकम्पीय जोखिममा रहने हुदा सधैं उत्तिकै सर्तकता अपनाउनु पर्ने राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारीको सुझाव रहेको छ ।
राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारी संगको एक घण्टाको रेडियो वार्ता यहाँ मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ ।